सं'सारकै स'बैभन्दा धनी अ'भिनेता यि'नको त'लब सु'न्नुभयो भने च'कित पर्नुहुन्छ । »
ए’जेन्सी । सं’सारकै सबैभन्दा ध’नी अ’भिनेता यि’नको तलब सु’न्नुभयो भने चकित पर्नु’हुन्छ ! संसार मा येस्ता अ’भिनेता छन् ज’सको तलब सु’न्दा हामीलाई अ’चम्म लाग्छ ! यि’नलाई द रक भनेर पनि चि’निन्छ तर यिनको नाम ‘ड’वेन जोन सन् हो यदि त’पाइले रे’स्लिंग हेर्नु’भएको छ भने यि’नलाई सजिलै चि’न्न सक्नुहुन्छ’ ! प’हिलाका रे’स्लर हुन् रे’स्लिंग छोडेर ह’लियुड तिर लागेका र’क यति फेमस भएकी उनको जति तल’ब कुनै अ’भिनेता को छैन संसार मा हा’लचालको सू’चीअनुसार उनलाई संसार कै सबै’भन्दा धनी अभि’नेता भनेर पनि चिनिन्छ ! रेस्लिं’ग का किं’ग केही वर्ष देखि अ’भिनय मा रहेका छन् !
शास्त्रका अनुसार यि ५ राशि भएका महिलाहरू जस्ले पतिलाइ आफ्नो खु*ट्टामा झु*क्न बाध्य गराउछन् । जानिराख्नुहोस्